परराष्ट्र मार्फत दुबईमा ब्लड मनी पठाए पछि तेह्रथुमबासी खड्गबहादुर जोगी नेपाल फर्किए। - Gulf Sandesh
परराष्ट्र मार्फत दुबईमा ब्लड मनी पठाए पछि तेह्रथुमबासी खड्गबहादुर जोगी नेपाल फर्किए।
May 3, 2019 May 3, 2019 GulfSandesh0Comments
काठमाडौँ ,नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत दुबईमा ब्लड मनी पठाए पछि दुबईमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएका तेह्रथुमबासी खड्गबहादुर जोगी नेपाल फर्किएका छन् । दुवईमा काम गर्दा आफुसँगै काम गर्ने एक फिलिपिनी नागरिकको हत्याको आरोप लागेपछि मृत्यु दण्ड पाएका तेह्रथुमका खड्गबहादुर जोगी पाँच वर्ष जेल सजाय पश्चात नेपाल फर्किन सफल भएका हुन् ।
दुर्घटनामा परेको फिलिपिनीलाई मानवताको नाताले उपचारका लागि अस्पताल पुर्याउँदा आफु परिवन्दमा परी हत्याको आरोपी बन्नु परेको उनको भनाई छ । विभिन्न वयानका क्रममा उनलाई त्यहाँको अदालतले दोषी ठहर गरेपछि मृत्युदण्ड सुनाएको थियो ।
अरबी कानुनमा मृतकका आफन्तले ब्लड मनी स्वीकारेको खण्डमा मृत्युदण्ड माफी पाउने प्रावधान रहेको छ । अरबी कानुनमा भएको सोही प्रावधानका कारण मृतकको परिवारले माग गरेको ब्लड मनी बुझाए पछि जीवितै स्वदेश फर्किएका हुन् ।
ब्लड मनी संकलन अभियानका कारण आवश्यक ब्लड ८० लाख रुपैयाँ मनी संकलन भए पछि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत दुबईमा ब्लड मनी पठाए पछि उनी नेपाल फर्किन सफल भएका हुन् ।
← कुखुराको मासु खादा मानिसमा नै देखियो बर्ड फ्लु।
बेलायतमा सम्पन्न निर्वाचनमा नेपाली मूलका ४ उम्मेद्वार विजयी →
रोजगारीका लागि साउदी पुगेका दुई भारतीयलाई मृत्युदण्ड
April 18, 2019 GulfSandesh 0
टर्की पुगेका ३ सय २० जना युवा स्वदेश फर्किए, ९ सय अझै अलपत्र ! फर्किएका युवाहरुको गुनासो नेपालीले नै दुख दिए’ !
December 27, 2018 GulfSandesh 0
१० महिनादेखि बन्द रहेको मलेसियाको रोजगारी खुल्यो।
April 1, 2019 GulfSandesh 0